Tsamba Yekutanga yaJohani 2:1-29
Jesu chibayiro chekufukidza zvivi (1, 2)
Kuchengeta mirayiro yake (3-11)
Murayiro mutsva newekare (7, 8)
Zvikonzero zvekuvanyorera (12-14)
“Musada nyika” (15-17)
Kunyeverwa nezvemunhu anopesana naKristu (18-29)
2 Vana vangu, ndiri kukunyorerai zvinhu izvi kuti murege kutadza. Asi kana munhu akatadza, tine mubatsiri* ari kuna Baba, iye Jesu Kristu,+ akarurama.+ 2 Iye chibayiro chekufukidza*+ zvivi zvedu,+ kwete zvedu chete asiwo zvenyika yese.+ 3 Kana tikaramba tichichengeta mirayiro yake, tinoziva kuti tinenge tasvika pakumuziva. 4 Uya anoti, “Ndasvika pakumuziva,” asi asingachengeti mirayiro yake, murevi wenhema, uye haana chokwadi mumwoyo make. 5 Asi munhu wese anochengeta shoko rake, anenge ava kunyatsoda Mwari zvakakwana.+ Izvi ndizvo zvinoita kuti tizive kuti tiri pamwe naye.+ 6 Uya anoti anoramba ari pamwe naye anofanira kuramba achifamba sekufamba kwaakaitawo.+ 7 Vadiwa, handisi kukunyorerai murayiro mutsva, asi murayiro wekare wamanga muinawo kubvira pakutanga.+ Murayiro iwoyo wekare ndiro shoko ramakanzwa. 8 Ndiri kukunyoreraiwo murayiro mutsva, waakazadzisa uye wamakazadzisawo, nekuti rima riri kupfuura uye chiedza chechokwadi chava kutopenya.+ 9 Uyo anoti ari muchiedza asi achivenga+ hama yake achiri murima.+ 10 Anoda hama yake anoramba ari muchiedza,+ uye haana chinomugumbura. 11 Asi munhu anovenga hama yake ari murima uye ari kufamba murima,+ uye haazivi kwaari kuenda+ nekuti rima rapofumadza maziso ake. 12 Vana vangu, ndiri kukunyorerai nekuti makaregererwa zvivi zvenyu nekuda kwezita rake.+ 13 Imi vanababa, ndiri kukunyorerai nekuti masvika pakuziva iye agara aripo kubvira pakutanga. Imi majaya, ndiri kukunyorerai nekuti makakunda akaipa.+ Imi vana vadiki, ndinokunyorerai nekuti masvika pakuziva Baba.+ 14 Imi vanababa, ndinokunyorerai nekuti masvika pakuziva iye agara aripo kubvira pakutanga. Imi majaya, ndinokunyorerai nekuti makasimba+ uye shoko raMwari riri kuramba riri mamuri+ uye makakunda akaipa.+ 15 Musada nyika kana zvinhu zviri munyika.+ Kana munhu achida nyika, haadi Baba;+ 16 nekuti zvinhu zvese zviri munyika zvinoti, kuchiva kwenyama,+ nekuchiva kwemaziso+ nekushamisira* nezvinhu zvauinazvo, hazvibvi kuna Baba, asi zvinobva munyika. 17 Uyezve, nyika iri kupfuura pamwe chete nekuchiva kwayo,+ asi munhu anoita kuda kwaMwari anoramba aripo nekusingaperi.+ 18 Vana vadiki, ino iawa yekupedzisira, uye sekunzwa kwamakaita kuti munhu anopesana naKristu ari kuuya,+ kunyange iye zvino patova nevanhu vanopesana naKristu vazhinji,+ uye izvozvo zvinotiratidza kuti ino iawa yekupedzisira. 19 Ivo vakabva kwatiri, asi vakanga vasiri vamwe vedu;*+ nekuti kudai vaiva vamwe vedu, vangadai vakaramba vari pamwe chete nesu. Asi vakabva kwatiri kuti zvionekwe kuti havasi vese vari pamwe chete nesu.+ 20 Mune kuzodzwa kunobva kuna iye mutsvene,+ uye mese zvenyu mune ruzivo. 21 Kukunyorerai kwandiri kuita hakurevi kuti hamuzivi chokwadi,+ asi ndiri kukunyorerai nekuti munochiziva uye nekuti hapana nhema dzinobva muchokwadi.+ 22 Ndiani anoreva nhema kunze kweuya anoramba kuti Jesu ndiye Kristu?+ Uya anoramba Baba neMwanakomana ndiye munhu anopesana naKristu.+ 23 Munhu wese anoramba Mwanakomana haasi pamwe naBaba.+ Asi munhu wese anobvuma Mwanakomana+ ari pamwe naBaba.+ 24 Kana muri imi, zvamakanzwa kubvira pakutanga ngazvirambe zviri mamuri.+ Kana zvamakanzwa kubvira pakutanga zvikaramba zviri mamuri, mucharambawo muri pamwe neMwanakomana uye muri pamwe naBaba. 25 Uyezve, iye pachake akativimbisa upenyu husingaperi.+ 26 Ndiri kukunyorerai zvinhu izvi nekuti pane vamwe vari kuedza kukutsausai. 27 Kana muri imi, kuzodzwa kwamakagamuchira kubva kwaari+ kunoramba kuri mamuri, uye hamufaniri henyu kudzidziswa nemumwe munhu; asi muri kudzidziswa pamusoro pezvinhu zvese nekuzodza kwake+ uye kuzodza kwacho hakusi kwenhema asi ndekwechokwadi. Semadzidzisirwo amakaitwa nekuzodzwa kwacho, rambai muri pamwe naye.+ 28 Saka imi vana vangu, rambai muri pamwe naye, kuti paanoratidzwa pachena tive nerusununguko rwekutaura+ uye kuti tirege kuzomutiza nekunyara pakuvapo kwake. 29 Kana muchiziva kuti iye akarurama, munozivawo kuti munhu wese anoita zvakarurama akaberekwa naye.+
^ Kana kuti “mumiririri.”
^ Kana kuti “chekuti tiyananisirwe.”
^ Kana kuti “nekuzvikudza.”
^ Kana kuti “vakanga vakasiyana nesu.”